10 Tanànan'ny morontsiraka tsara tarehy indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Tanànan'ny morontsiraka tsara tarehy indrindra any Eropa
Miaraka amin'ny Ranomasimbe Atlantika amin'ny lafiny iray ary ireo tanàna tsara tarehy indrindra etsy an-daniny, ny 10 ny tanàna tsara tarehy indrindra amorontsiraka any Eropa no tanjona tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra miala sasatra sy tsy hay hadinoina. Miankina amin'ny harambato, mihaino ny onjan-dranomasina, milentika ao anaty ranomasina madio, na mahita ireo angano ao ambadiky ny seranan-tsambo sy ny tilikambo, dia traikefa manokana ho hitanao eny amoron'ny morontsirak'i Italia ihany, Frantsa, sy Angletera.
1. Tanànan'ny morontsiraka tsara tarehy any Italia: Amalfi Coast
Ireo trano tsara tarehy malaza mitazana ny Ranomasina Tyrrhenian ao amin'ny tanànan'i Amalfi dia tonga lafatra amin'ny carte postales. Ary noho izany, Amalfi no tampon'ny tanàna amoron-tsirak'i Amalfi ho tanàna morontsiraka tsara tarehy indrindra any Italia. Ankoatry ny, ho hitanao fa io no tanjona amin'ny fahavaratra indrindra any Eropa. Izany dia noho ny rano manga manohitra ny harambato, ary trano maro loko izay mamorona toerana mety indrindra amin'ny fialana an-dranomasina.
Fanampin'izany, raha maniry hahita bebe kokoa ianao, avy eo ny Katedraly Amalfi sy ny villa Rufolo, manolotra fahitana mahavariana momba ny Ranomasina Mediterane sy ny zaridaina. Na izany aza, ny manasongadina ny Amalfi dia ny 40 minitra’ mitondra fiara avy any Vietri Sul Mare mankany Positano miaraka amin'ny sasany fomba fijery mahatalanjona indrindra ny morontsiraka.
2. Tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra indrindra any Frantsa: Saint-Malo
Raha Saint-Tropez sy Nice kosa dia 2 amin'ireo tanàna amoron-tsiraka malaza any Frantsa, Saint-Malo any Brittany amin'ny fantsona anglisy dia amoron-tsiraka miafina vatosoa. Izany dia noho ny tantara manankarena sy tantara nitranga teny amoron'ny Saint-Malo. Ao Saint-Malo, hitsangatsangana miverina ara-potoana ianao amin'ny fotoan'ny piraty, ary ny corsair frantsay, miady sy miaro an'i Grand France amin'ny rindrina.
ankehitriny, Ny rindrin'i Saint-Malo dia mahafinaritra amin'ny fitsangatsangana manodidina ny tanàna taloha, mankafy ny filentehan'ny masoandro, ary mijery ny onja. Mba hankasitrahana tanteraka ny hatsaran'ny Saint-Malo dia tokony hijanona mandritra ny alina ianao ary hitsidika ny nosy Grand Be sy Petit Be fort.
3. Tanànan'ny morontsiraka tsara tarehy any Eropa: Lerici, Italia
Tsy betsaka no naheno ny tanànan'i Lerici ao amin'ny Riviera Italiana, iray amin'ireo tanàna amoron-tsiraka tsara indrindra any Eropa. Ny tanàna mpifanila vodirindrina aminy La Spezia no mety ho teboka fanombohana ny dianao mankany Cinque Terre, fa i Lerici dia manana majika tsy fantatra. Hahita an'i Lerici ianao 8 kilometatra atsimo atsinanan'ny La Spezia, misy trano miloko, coves, seranan-tsambo, trano mimanda taonjato faha-12 izay mijery ny ranomasina, fomba fijery mahatalanjona, ary tongotra lavitra lalana manamorona ny morontsiraka.
Ary, Lerici dia teboka mahafinaritra ho an'ny dianao mankany amin'ny morontsiraka italiana: Ilay tsara tarehy Cinque Terre, Portofino, ary Portoverane. Azonao atao ihany koa ny mitsangatsangana an-andro mankany Pisa mahafinaritra.
4. Tanànan'ny morontsiraka tsara tarehy any Frantsa: Cassis-Marseille
Hantsana vatosokay, rano madio madio, fahitana any amin'ny morontsiraka avy amin'ny kafe amoron-dalana, ataovy Cassis ho tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra indrindra. Eo anelanelan'ny hantsam-bato avo indrindra any Eropa no misy an'i Cassis, Cap Canaille, ary ny vatosokay fotsy any Calanques. Ary, amin'ny Cassis, hahita ny tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra ianao – Voaloboka Provence, ary ny Ranomasina Mediterane mahafinaritra.
Sitroka amina vera Rose divay, mijery mpanjono, no ho zava-dehibe amin'ny fialan-tsasatrao amin'ity tanàna amoron-tsiraka majika ity. Ity vatosoa frantsay miafina ity dia mitaingina lamasinina lavitra an'i Marseille, ary ny fialantsasatra tonga lafatra avy amin'ny tanàna be olona.
Paris mankany La Rochelle miaraka amina lamasinina
5. Arromanches-Les-Bains any Frantsa
Malaza amin'ny fametrahana an-tanety an'i Normandy, Arromanches dia tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy any amin'ny faritra Normandy any Frantsa. Mifanohitra amin'ny hevitra miaramila taloha, anio dia hahita tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra ianao eo amoron'ny Atlantika.
Ary noho izany, eo am-pialan-tsasatra tsy hay hadinoina eo amoron'ny ranomasina ianao, amin'ny scuba diving, yachting, mitaingina soavaly eny amin'ny morontsiraka volamena, sy fandroana masoandro. Ho an'ny faran'ny herinandro fohy na lava, hankafizinao ny ranomasina amin'ny Arromanches-Les-Bains’ 550 mponina, ary miaina ny Majika Normandy.
Paris mankany Rouen miaraka amin'ny lamasinina
Paris mankany Lille miaraka amina lamasinina
Rouen mankany Brest Miaraka amin'ny lamasinina
Rouen mankany Le Havre miaraka amina lamasinina
Ny morontsiraka Cornish dia mipaka hatrany 679 kilaometatra ny hantsana, lava-bato, sy ny tora-pasika. Manampy ny satan'i Cornwall ho tanàna fitetezana tsara indrindra any Angletera. Noho izany, raha mikasa ny hanampy hetsika spaoro amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina ianao, Cornwall dia tonga lafatra.
Ny tanàna amoron-tsiraka tsara indrindra any Great Britain dia saikinosy tsara tarehy. Ary noho izany, na aiza na aiza no itodihanao, ho hitanao ny hijoroanao eo amoron'ny morontsiraka mahatalanjona. Ho an'ny fomba fijery tsara indrindra ny morontsiraka sy ny morontsirak'i Cornwall tsara indrindra, afaka mandeha amin'ny lalan'ny South West Coast ianao.
7. Tanànan'ny morontsiraka Honfleur any Frantsa
Raha mitady tanàna morontsiraka tsara indrindra any Frantsa ianao, avy eo Honfleur no valiny. Amin'ny fihaonan'ny renirano Seine sy ny ranomasina, river Cruises, trano maro loko manome taratry ny ranomasina, ary mandeha amoron-dranomasina, ataovy Honfleur iray amin'ireo 10 tanàna amoron-tsiraka tsara indrindra any Eropa.
Ny volana oktobra no fotoana mety indrindra handehanana sy hankafizanao ny marina sy ny rivotra madio amoron-dranomasina any Honfleur. Izy io dia ho fomba tsara indrindra hanaovana veloma ny fahavaratra ary hampamono ny masoandro ary hisorohana ny hamandoana, ary mpizahatany marobe.
Miverina any Paris miaraka amin'ny lamasinina
Paris mankany Calais miaraka amina lamasinina
Rouen mankany Calais miaraka amina lamasinina
Santa Cesarea Terme dia tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra any Puglia. Mahatazana ny ranomasina, hahazo mankafy ny ranomasina mahafinaritra ianao ary fandroana mafana amin'ny fialantsasanao italianina.
Mifanohitra amin'ireo tanàna amoron-tsiraka maroloko hafa any Italia, Santa Cesarea dia miavaka amin'izany Maritrano silamo. Midika izany, Villa sy tilikambo fotsy mahavariana manodidina ny tanàna, ary mijery tsara tarehy tanteraka miaraka amin'ny ranomasina manga eny amin'ny faravodilanitra. Raha manapa-kevitra ny hitsidika ity tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra ity ianao, mety ho tsara vintana ianao mijanona ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahinin'ny trano mimanda miova ao an-tanàna.
Naples ho any Brindisi miaraka amina lamasinina
Naples mankany Bari miaraka amin'ny lamasinina
Bari mankany Fasano miaraka amin'ny lamasinina
Naples mankany Fasano miaraka amina lamasinina
9. Brugge (efa nampiasaina), Belzika
Ny Old Town of Brugge dia iray amin'ireo lehibe indrindra ivon-tanàna antitra manintona any Eropa. Brugge koa dia mitazona ny anaram-boninahitra amin'ny iray amin'ireo 10 tanàna amoron-tsiraka tsara indrindra any Eropa. Bruges amoron-dranomasina dia fahitana mahatalanjona tokoa amin'ny maso, miaraka amin'ny lakandrano, sambo, sy trano tsara tarehy.
Miaraka amoron-tsiraka mahafinaritra, tsy mahagaga raha mpanjaka Flemish maro no nifidy, Brugge ho tranon'izy ireo. Ary noho izany, tokony ho vonona amin'ny lapa sy tilikambo betsaka indrindra manatrika ny ranomasina ianao.
Ny tanàna tsara tarehy any Venise dia manidy ny antsika 10 Tanànan'ny morontsiraka tsara indrindra any Eropa. Ny maritrano, gelato, ary mitaingina sambo ataovy tonga any amin'ny toerana nofinofy tanteraka i Venise.
Mipetraka amin'ny ranomasina i Venise, ary izany no antony maha-tanàna farany morontsiraka azy eran'i Eropa. Italiana dia mivavaka amin'i Venise, ary ny mpizahatany mankafy azy io koa. Hanana fotoana mahatalanjona ianao mandehandeha eraky ny arabe sy ny arabe ety.
Eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao handamina ny dianao mankany amin'ny "tanàna amoron-tsiraka 10 tsara tarehy indrindra any Eropa".
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Tanàna amoron-tsiraka 10 tsara tarehy indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
beautifulcoastaltownitaly beautifulcoastaltownseurope CoastalTowns frenchriviera MORONTSIRAK'I travelengland